Fiji sy New Zealand miditra amina ‘famonoan-tena ara-diplaomatika’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2008 16:39 GMT
Mihenjana ny tady eo amin'ny fifandraisan'i Fiji sy New Zealand nanomboka ny Talata teo raha samy nandroaka ireo Lehiben'ny diploamaty niasa tany aminy avy ny roa tonta.
Tanaty vàlan-dresaka ho an'ny mpanao gazety io Talata hariva io, nanambara ny fitondrana foibe ao Fiji fa tsy noho ny fandàvana tsy hanome fahazoan-dàlana olona telo isan'ny fianakavian'olona ambony amin'ny governemantan'i Fiji izay tonga teo amin'ny fitondrana taorian'ny fanonganana niseho ny Desambra 2006 no androahana ny ambasadaoro Caroline McDonald. Ankilan'izay, i Aiyaz Sayed-Khaiyum dia mametraka “ny zava-bitan'i McDonald nandritry iny taona lasa iny ho mifanohitra amin'izay fomba fitondran-tena ara-diplaomatika eken'ny fenitra eran'izao tontolo izao.”
Ambaran'i Sayed-Khaiyum ihany koa fa ny governemanta any New Zealand sy Aostralia dia mitsikilo ireo fifandraisana an-telofaonina ao Fiji.
Ny governemantan'i New Zealand dia namalifaty ny fandroahana an'i McDonald amin'ny alalan'ny fanomezana fito andro mba handaozan'ny mpiasam-panjakana ambonin'i Fiji ny fireneny. Tanaty filazana an-gazety iray, nanambara ny ministeran'ny raharaham-bahiny ao New Zealand momba ny raharaha Fiji fa tsy misy akory kakay manokana amin'i McDonald, mahatonga fametraham-panontaniana raha ho fanohizana ny fandraràna ny fivezivezena napetrak'i New Zealand sy Aostralia taorian'ny fanonganam-panjakana tao Fiji tamin'ny Desambra 2006 ity.
I McDonald no solotenan'i New Zealand faharoa voaroaka avy tany Fiji tato anatin'ny 18 volana.
Fantatry ny governemantan’I Aostralia koa tamin’ny talata fa tsy hahazo “visa” ny “Mpanolotsaina momba ny fiarovana any Pasijika Atsmo”, ary nomena fito andro mba hialàna ao Fiji.
Ny mpitoraka Blaogy sy ny mpitsikera avy any New Zealand sy Fiji dia samy nahita hadisoana tao amin’ny fihetsiky ny governemantany avy.
Antsoin'i Raw Fiji News hoe tsy fandraisan'andraikitra ny fihetsiky ny Praiminisitra Frank Bainimarama.
Ny fandroahana fanindroany ny Mpiasam-panjakana ambonin'ny NZ tany Fiji nataon'ny fitondràna miaramila tao anatin'ny 12 volana dia famonoan-tena ara-diplomatika. Nila ady tany amin'ny governemanta NZ vaovaon'i Key i Frank ary hahita tokoa izy. Hisy ny hetsika famaliana faty haigana ary tsy avy amin'ny governemantan'i NZ ihany fa ny fiaraha-monina iraisam-pirenena iray manontolo. Hanainga ny terataniny i NZ mba hanatsahatra ny fizahantany any Fiji izay nankafiziny noho ny tsy fanomezan'ny governemantany fahafaham-po feno sy malalaka ny antso vonjy nataon'olona iray teratany avy any New Zealand any Fiji. Ary rariny loatra raha mahatsiaro sarotiny amin'ny fiarovana ny terataniny ry zareo.
Ao amina lahatsoratra hafa, Raw Fiji News dia miteny fa mampiasa ny resaka ara-diplomatika ny governemanta mba hamiliviliana ny sain'ny mpifidy ho any amin'ny zavatra hafa.
Farany dia nataon'ilay Frank tsy ampy fieritreretana ihany ny filazana fandroahana ny solotenan'i New Zealand tany Fiji mba hampisehoana amin'i NZ sy ny fiaraha-monina iraisam-pirenena fa azy i Fiji. Toa an'i Mugabe tany Zimbabwe, i Frank dia nanokatra vava-ady azy manokana amin'i NZ izay lazain'ny maro ho fanarian-dia sy fialan-tsiny ho antony hanemorana ny fifidianana ho amin'ny manaraka.
Nanoratra talohan'ilay fandroahana, ny Whale Oil Blog avy ao New Zealand dia nilaza fa tokony fomba tsaratsara kokoa no nitantanan'ny governemantan'i New Zealand ity raharaha diplaomatika iray ity.
Ny fanambonian-tena sy ny tondro-molotra dia tsy mankaiza matetika. Misy vahaolana tsotra ho an'ny zava-drehetra fa io dia mila an'i New Zealand hanadino ny toerany talohan'ny fanandezozana i Fiji hanaiky ny fanampiana an-tsitrapo ka hamerina azy ireo eo amin'ny làlam-ben'ny demokrasia.
Ao amin'ny tranokalam-baovaon'i Fiji, dinika sy sehatra fitsikerana, ny hetsiky ny governemanta dia sady nahazo fiderana no niteraka fanoherana koa.
Ao amin'ny FijiLive, nanamarika i Lis Body:
Farany dia ho fantatr'i Frank … fa i Fiji dia tsy inona akory fa teboka kely monja ao anatina ranomasim-be ihany ary isika tsy afaka mifaninana amin'ny firenena toa an'i NZ, OZ na firenena hafa nanao fifidianana demokratika. NZ sy Aostralia dia tokony hanakatona ny ambasady any Fiji. Ny mponina any Fiji tahaka an-dry Tonga dia mety handeha any amin'ny firenena akaikiny mba hitambezo visa ary ny saran'izay… oh leity!
Avy amin'i Peni, maka ny Praiminisitry ny New Zealand John Key ho maridrefy:
Eny amin'ny tavanao ry Key, izao no mitranga rehefa mandray anjara amin'ny raharahan'ny firenen-kafa ianao. Fa maninona koa no tsy najabaka tany amin'ny firenena hafa toa an'i Shina ny orona be-nao , Burma, Iran, Libia sy ny sisa? Eny, hainao tsara. Fantatro koa ny valiny … Kely loatra ny firenenao raha any amin'ireo firenen-dehibe ianao no mihevitra hampiasa ny tetika tianao indrindra.
Tanaty vaovao tselatra, ny ampahany miresaka momba ny New Zealand miresaka momba ny governemanta ao New Zealand dia nametraka ity farany amin'ny soratra anjorony fa vaky ny ady ara-diplaomatika amin'i Fiji, hoy i stuart munro manampy fanamarihanat:
Mba hiazonana ny toerana misy an'ny NZ manoloana an'i Fiji, ny governemantantsika dia nandray fepetra tsy dia voahevitra loatra sy miendrika valifaty
Tsy dia narisika loatra i Bainimarama tamin'ity resaka fanonganam-panjakana ity – nitàna toeran-droa izy saingy mahay milomano, ary ny nampiavaka azy dia ny tsy fisian'ny rà nandriaka sy ny tsy fanarahana ny Lalampanorenana.
Ny famaizana mahazo antsika amin'izao fotoana dia maneho kely ihany fa tsy maintsy apetraka amin'ny toerany ny fahaizana miaraka amin'ny mpiara-belona.